ओलीलाई ठूलो झड्का दिनेगरी १७ महिना निर्धक्कसँग सरकार चलाउने चाँजापाँजो मिलाइ दिएका माधव नेपाललाई देउवाको दह्रो साथ ! - Rising Dainik
ओलीलाई ठूलो झड्का दिनेगरी १७ महिना निर्धक्कसँग सरकार चलाउने चाँजापाँजो मिलाइ दिएका माधव नेपाललाई देउवाको दह्रो साथ !
July 22, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on ओलीलाई ठूलो झड्का दिनेगरी १७ महिना निर्धक्कसँग सरकार चलाउने चाँजापाँजो मिलाइ दिएका माधव नेपाललाई देउवाको दह्रो साथ !
काठमाडौँ / कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनमा एमालले नै मुख्य मूमिका खेलेपछि पार्टी औपचारिक फुटतिर अग्रसर भएको छ । बिशेषगरी पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेकपा एमाले विभाजन गर्ने गृहकार्य तीव्र पारेका हुन् ।विद्यमान दलसम्बन्धी कानूनमा टेकेर दल फुटाउन असहज भएकाले नेता नेपालले सरकारसँग सहयोगको याचनासमेत गर्न भ्याइसकेका छन् । जसमा उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट आवश्यक सहयोग हुने आश्वासन पाइसकेका बताइन्छ।
नेता नेपालले दल विभाजनका लागि तीन विकल्प अघि सारेका छन् । पहिलो, अहिलेकै विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली अनुसार नै संख्या पुर्याउने र अलग दल बनाउने छ ।विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीमा दल विभाजन निम्ति संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउनुपर्ने प्रावधान छ । केन्द्रीय समितिमा नेपाल पक्ष ४० प्रतिशत हाराहारीमा रहे पनि संसदीय दलमा उपस्थिति निम्छरो छ ।
त्यसैले पहिलो विकल्प सफल नभएमा सरकारको सहयोगमा अहिलेको कानून संशोधन गराएरै भए पनि पार्टी विभाजन गर्ने नेपालको तयारी छ । विद्यमान कानून परिमार्जनको आवश्यकता महसुस भएमा त्यसलाई प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराउन सकिन्छ ।
कानून संशोधन सहज ढंगले हुन नसकेमा अध्यादेश ल्याएरै भए पनि उद्देश्य पूरा गर्ने नेपालको दाउ छ । तर अहिले नै अध्यादेश ल्याउन मिल्न अवस्था छैन । किनभने, संसदको बजेट अधिवेशन चालू छ । त्यसैले यो अधिवेशन अन्त्यपछि संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी अध्यादेश ल्याउने आश्वासन सरकारले नेपाल पक्षलाई दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री देउवासँग नेता नेपालले दल विभाजनका लागि परेको अप्ठ्यारोबारे केही दिनअघि जानकारी गराएका छन् । पाँचौंपटक सत्तारोहण गर्न निर्णायक भूमिका खेल्दै १७ महिना निर्धक्कसँग सरकार चलाउने चाँजापाँजो मिलाइ दिएका नेपाललाई गुन तिर्न उपयुक्त समयको पर्खाइमा रहेका देउवाले त्यसका लागि आवश्यक कानून बनाउन आफू तयार रहेको बताएका छन् ।
देउवाले दल विभाजनमा परेको गाँठो फुकाउने आश्वासन दिएपछि नेता नेपाल अहिले हौसिएका छन् । उनले आफ्नो समूहका अतिरिक्त ओली गुटका असन्तुष्ट नेतालाई तान्ने प्रयास गरिरहेका छन् । बहुमत पुर्याएर सूर्य चिह्न नै हडप्ने महत्त्वकांक्षी लक्ष्य नेता नेपालले राखेका छन् ।
यसरी ओलीलाई ठूलो झड्का दिनेगरी १७ महिना निर्धक्कसँग सरकार चलाउने चाँजापाँजो मिलाइ दिएका माधव नेपाललाई देउवाले पनि दह्रो साथ दिने चर्चा सुरु भएको छ ।
आफूवि’रुद्ध ज्यान छाडेरै लागिपरेको माधव पक्षलाई ओलीले किन दिए आममाफी ?
विश्वकै अग्लो भवन बुर्ज खलिफामा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा झलमलाइँदै
अस्पतालमा पोस्ट-मार्टम गर्न लगिएको श’व चिया पिउँदै गरेको भेटिएपछि…
April 28, 2021 April 28, 2021 Ramash Kunwar
July 27, 2021 Ramash Kunwar